ဘဲလေး၊ - သတင်းများ - Fitdance ဘဲလေးကျူတူစက်ရုံ။
နေအိမ် > သတင်း > စက်မှုသတင်း > ဘဲလေး၊
အလှတရားကိုနှစ်သက်သောမိန်းကလေးများသည်တစ်နေ့တွင်သူတို့အဖြူရောင်အဖြူရောင်တက်တူးကို ဖြတ်၍ အဖြူရောင်ရွှေရောင်အကများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဘောလုံးဖိနပ်ကိုစီး။ အလွန်မြင့်မားသောဘောလုံးခေါင်းများနှင့်ချည်ထားနိုင်သည်ဟုထင်မြင်မိသည်။ စင်မြင့်ပေါ်မှာရပ်နေတာဟာ tiptoe ပေါ်က Sprite လိုပါပဲ။ ကျွန်တော့်နှလုံးသားကိုတောင့်တနေတဲ့ jumpballet dancers တွေချည်ထားပါ။ ထို့ကြောင့်မိန်းကလေးများစွာသည်ဘဲလေးအက၌လမ်းလျှောက်ရန်ရွေးချယ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်သင့်တော်သောဝတ်စုံကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်သင်၏တိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုသည်။ သင်၏စိတ်နေသဘောထားကိုဘဲလေးပုံစံများကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းနိုင်သည့်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ရန်သင်စိတ်ဝင်စားသည်ဖြစ်စေ၊ သင့်ဆရာများနှင့်သင်၏အတန်းဖော်များအားသင့်လျော်သောအဝတ်အစားများဖြင့်အတန်းတက်ခြင်းသည်သင်ကိုယ်တိုင်၊ သင်၏ဆရာများနှင့်သင်၏အတန်းဖော်များအားလေးစားမှုအနည်းဆုံးဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်လေ့ကျင့်သောအ ၀ တ်အစားများကို ၀ တ်ဆင်ရသည်
ဘဲလေးသည်လူ့ကိုယ်ခန္ဓာ၏လှပမှုကိုအပြည့်အဝပြသနိုင်သည့်အနုပညာဖြစ်သည်။ သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောအဝတ်အစားများကို ၀ တ်ဆင်ထားပြီးဆရာသည်သင်၏လှုပ်ရှားမှုများရှိမရှိနှင့်ကြွက်သားများမှန်ကန်မှုရှိမရှိရှင်းလင်းစွာတွေ့မြင်နိုင်သည်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ဘဲလေးလူတန်းစားဟာဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့ရှုထောင့်ကနေကြည့်ရင်ယောဂဝတ်စုံ၊Professionalballet လေ့ကျင့်ရေးအ ၀ တ်အစားများ၏အခြေခံအကျဆုံးလိုအပ်ချက်များမှာတင်းကျပ်။ ချည်မျှင်၊ ချွေးစုပ်ယူခြင်း၊ trainingsocks သည်အကောင်းဆုံးအလင်းရောင်ဌာနဖြစ်သည်။ဘာကြောင့်မေးတာပါလဲ? ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်၊ ဘဲလေးကိုယ်ခန္ဓာတည်ဆောက်မှုသည်ပြင်းထန်မှုသည်ယေဘုယျအားကစားကြံ့ခိုင်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်။ မရနိုင်၊ ပွင့်လင်းခြင်း၊ ခုန်ခြင်း၊ ဘဲလေးဖြောင့်ခြင်းသုံးချက်ကြောင့် ballet ၏လေ့ကျင့်ခန်းသည်ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံး၏ကြွက်သားများကိုတင်းကျပ်စေရမည်၊
အစပြုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သောဘဲလေးများသည်အထူးသဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသောလူငယ်များဖြစ်သည့်အခါပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုများကိုမလေ့ကျင့်ဘဲကြွက်သားများကိုကောင်းမွန်စွာလေ့ကျင့်ခြင်းမပြုလုပ်ပါကကြွက်သားမျှင်များကိုဆန့်ခြင်းထက်ပါးလွှာခြင်းမှခံစားရလိမ့်မည်။ နောက်ထပ် အလေးအနက်ထား, သူတို့က causephysical ဒဏ်ရာလိမ့်မယ်။ဘဲလေးများအတွက်ကိုယ်ခန္ဓာအ ၀ တ်အစားသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၏လိုင်းများနှင့်ကြွက်သားများကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်အောင်သင်ကြားပေးခြင်းအားဖြင့်ဆရာများအားလေ့ကျင့်ပေးသည်။ ယောဂနှင့်အားကစားအ ၀ တ်အထည်လျော့ရဲခြင်းသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အားနည်းချက်များကိုသာဖုံးကွယ်လိမ့်မည်။ စံအချက်, အချိန်မီမှန်ကန်သောလို့မရပါဘူး, ရေရှည် Non-standardpractice အလွန်လေးနက်သောအကျိုးဆက်များသည်။
ဒီမှာဥပမာငါးခုသည်ဘဲလေးတွင်အခြေခံလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုသည်ခြေချောင်းများနှင့်ခြေထောက်များကိုကိုယ်ခန္ဓာ၏ဘေးဘက်သို့လှည့်ရန်ဖြစ်သည်။ ခြေနှစ်ချောင်း၏အောက်ခြေသည်အနိမ့်အမြင့်အတွင်းပိုင်းမှအပမြေပြင်ပေါ်တွင်ညီမျှစွာချိတ်ထားသည်။ အစပြုသူများသည်ခြေထောက်များကိုနှစ်ဖက်လှည့်ထားသော်လည်းဒူးများရှေ့သို့ ဦး တည်နေပြီးခြေထောက်များကိုလိမ်ပြီးညှစ်ထားကြသည်။ အချိန်၌သင်တို့၏ kneemistakes ။ ရေရှည်တွင်ခြေထောက်များသည်ပုံပျက်။ ပိုမိုထူထပ်လာပြီးခြေထောက်နှင့်ဒူးဒဏ်ရာများလည်းရနိုင်သည်။ မည်သည့်စကားပြောရမည်ကိုလေ့ကျင့်ရန်အတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိုယ်ခန္ဓာဝတ်စုံကိုဘောလုံးကစားခြင်းသည်အရေးကြီးကြောင်းအမြဲတမ်းအလေးထားဖော်ပြသည်။
ဒုတိယအနေဖြင့်ဗေဒအမြင်အရကျောင်းသားများသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဲလေးအလေ့အကျင့်ကိုယ်ခန္ဓာအ ၀ တ်အစားများကိုယူနိုက်တက်စတိတ်သို့အတန်းသို့တက်ရမည်။ ဘဲလေးဝတ်စုံနှင့်ဘဲလေးစွမ်းဆောင်ရည်သည်အနုပညာလက်ရာများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဘဲလေးဝတ်စုံသည်ဘဲလေးအနုပညာ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်၊ ဘဲလေး၏စွမ်းဆောင်ရည်တွင်အလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ ရာထူးအမျိုးမျိုးရှိဘဲလေးသည်အောင်မြင်ရန်အတွက်ဘဲလေးဝတ်စုံသတ္တုပါးကိုအားကိုးသည်။ ထူးခြားတဲ့ artisticvisual အကျိုးသက်ရောက်မှု။ အကယ်၍ သင်သည်လှပသောကိုယ်ခန္ဓာဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ပါကသင်သည်ဘဲလေး၏လေထုထဲတွင်ပိုမိုသင့်တော်ပါသည်။ သင်၏ခံစားချက်ကိုစည်းကမ်းတိုးမြှင့်ခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးတက်ခြင်း၊ သင်၏စိတ်ထားနှင့်စိတ်နေသဘောထားကိုတိုးတက်စေခြင်းတို့သည်သင်တို့၏ဘဲလေးတစ်ချောင်းကဲ့သို့ခံစားရလိမ့်မည်။ သင်ကိုယ်တိုင်ကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ပွေ့ဖက်ခြင်းဝတ်စုံကိုမည်သည့်အခါမှမ ၀ တ်ဆင်သင့်ပါ။ agood ကိန်းဂဏန်းမရှိဘူး။ ကိုယ်ခန္ဓာဝတ်စုံသည်ဘဲလေးဖြင့်ယူဆောင်လာသည့်ကိုယ်ခန္ဓာပုံသဏ္moreာန်ကိုပိုမိုထင်ရှားစေသည်။ စကားလုံးတစ်လုံးဖြင့်ပြောရလျှင်တင်းကျပ်သောဘဲလေးဝတ်စုံသည်မိန်းမတိုင်းကိုကြည်လင်ပြီးလှပစေလိမ့်မည်။
၁။ ရှေ့ပိုင်းလည်ပင်းသည်ကျယ်လွန်း။ မဖြစ်သင့်ပါ၊ သို့သော် back ပွီသည်အပြည့်အဝဖွင့်ရန်အတွက်၎င်းသည်ပလက်ဖောင်းများဖော်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။
၂။ တံတောင်ဆစ်အဆစ်များကိုမြင်နိုင်ရန်လက်မဲ့ဖြစ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အင်္ကျီလက်များရရှိနိုင်ပါကတံတောင်ဆစ်အထက်သို့လှိမ့်ပါ။
၃။ လိုအပ်သောအခါထောင့်များကိုပစ်ချရန် flounce စကတ်တစ်ခုကိုထည့်ပါ။
၄။ ကိုယ်ခန္ဓာအဝတ်အစားများသည်များသောအားဖြင့် elastic material ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်ကလေးများသည်အနည်းငယ်ပိုကြီးလျှင်၎င်းတို့သည် ၀ တ်နိုင်သည်။ သို့သော်မကြာခဏပခုံးများနှင့်တင်ပါးပေါ်ရှိခံစားချက်သည်“ Wow!” ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကလေးများသည်ကြီးထွားလာပြီးခန္ဓာကိုယ်အ ၀ တ်အစားများသို့ပြောင်းလဲရန်မြန်ဆန်စွာကြီးထွားလာသည်ကိုဆိုလိုသည်။ အရွယ်ရောက်သူများအတွက်သင်အလေးချိန်ထပ်မံရရှိခြင်းဖြစ်သည်။
(၁) ပထမ ဦး ဆုံး ၀ တ်ဆင်ထားသည့်ဘောင်းဘီ၊
(2) ထိုအခါခြေအိတ်ကိုဝတ်ဆင်ပါ၊ အပေါ်သို့ဆွဲပါ၊ လက်ကိုဆွဲပါ၊
Ps: တစ်စုံတစ်ခုသောဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ရာတွင်အလျင်အမြန်မနေပါနှင့်။ အကယ်၍ သင်သည်လည်ပင်းကိုကိုင်ထားလျှင်ဆွဲတင်ပါ။ ပခုံးများနှင့်လက်မောင်းများသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအလွန်ရင်းနှီးကြသည်။
(1) 30âနှင့်အတူပူနွေးသောရေအောက်တွင်သင့်လျော်သောကြားနေဆပ်ပြာမှုန့်များထည့်။ ကောင်းစွာရောနှောပါ
(၂) အတွင်းဖက်နှင့်အ ၀ တ်အထည်အလှည့်သည်အပြည့်အဝစုပ်ယူနိုင်သည်
(3) နှိပ်၏နည်းလမ်း! 30âအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသန့်ရှင်းသောပူနွေးသောရေ၌, ၏အဆင့်ကိုပြန်လုပ်, အမြှုပ်ထွက် extrude
နောက်တစ်ခု:ဘဲလေးအကသမားများသည်ဘာကြောင့် tiptoe ပေါ်တွင်ရပ်နေသနည်း။